တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံးမှ သံအမတ်ကြီးအားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံးမှ သံအမတ်ကြီးအားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ – ၁၆
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသော H.E. Mr. Kristian Schmidt အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင်EU နှင့်မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ခိုင်ခိုင်မာမာလျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်တပ်မတော်မှဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံးမှသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ ဥရောပသမဂ်ဂ အဖှဲ့ရုံးမှ သံအမတျကွီးအားလကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ – ၁၆
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဥရောပ သမဂ်ဂအဖှဲ့သံအမတျကွီးအဖွဈ ခနျ့အပျခံရသော H.E. Mr. Kristian Schmidt အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျEU နှငျ့မွနျမာနိုငျငံဆကျဆံရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ ခိုငျခိုငျမာမာလြှောကျလှမျးနိုငျရနျအတှကျ ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိအောငျတပျမတျောမှဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပှားလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား နှငျ့ပတျသကျပွီး အပွနျအလှနျဆှေးနှေးကွသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ဥရောပသမဂ်ဂအဖှဲ့ရုံးမှသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Wang Yi အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တော်တည့်မှန်ကန်သည့်ခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် လက်အောက်ကိုဦးဆောင်ရန်နှင့် လက်အောက်က ယုံကြည်အားကိုးရသောခေါင်းဆောင်များဖြစ်ရန်လိုအပ်
စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်​မ​တော်​ကာကွယ်​​ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်​ချုပ်​မှူးကြီး မင်း​အောင်​လှိုင်​ သည်​ တရုတ်​ပြည်​သူ့သမ္မတနိုင်​ငံ သမ္မတ Mr. Xi Jinping နှင့်​ ​တွေ့ဆုံ​ဆွေး​နွေး